အရက်နှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ: ငါ albuterol နှင့်အရက်ရော? - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ ရပ်ရွာ ကုန်ပစ္စည်း သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှိပ်ပါ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> အရက်နှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ: albuterol သို့မဟုတ် Singulair ကိုသောက်စဉ်ကျွန်ုပ်သောက်နိုင်ပါသလား။
ထောင့်တစ်နေရာ၌အားလပ်ရက်များနှင့်အတူ, သင်သည်အိမ်မှာနေလျှင်ပင်, အရသာရယူထားသောအစားအစာ - charcuterie ပျဉ်ပြားနှင့်ခရစ္စမတ်ကွတ်ကီးအများကြီးဖြစ်ဖို့ခညျြနှောငျနှင့် yummy သောက်ရန်ပူချောကလက်ဗုံးနှင့်သောက်ရန် eggnog တူသော sips!
ဒါပေမယ့်မင်းကတစ်ယောက်ပါ လူသန်းပေါင်းများစွာ ယူအက်စ်တွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူသင်အရက်နှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတူတကွ go ပါသလား မင်းတို့ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆေးသောက်ပြီးအရက်လည်းသောက်နိုင်မလား။ ထွက်ရှာရန်အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
သင် albuterol နှင့်အရက်ရောနိုင်သလား?
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အတူလူများမကြာခဏကဲ့သို့သောကယ်ဆယ်ရေးရှူရှိုက်မိပါရှိသည် Hvent Proventil , ProAir HFA သို့မဟုတ် Ventolin HFA - သို့မဟုတ်ယေဘုယျဖြစ်ပါသည် HFA albuterol ။ သင်မည်သည့် albuterol ဆေးကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ albuterol နှင့်အရက်တို့သည်အတူတကွပေါင်းသင်းသည်ကိုသင်သိလိုပေလိမ့်မည်။
သတင်းကောင်းက albuterol HFA များအတွက်သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် အရက်နှင့်အတူတစ် ဦး အပြန်အလှန်စာရင်းပြုစုမထားဘူး။ The သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် ဘို့ Xopenex HFA (levalbuterol) သည်လူကြိုက်များသောကယ်ဆယ်ရေးရှူရှိုက်မိသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအရက်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလည်းမဖော်ပြပါ။
အခြားပေါ်ပြူလာသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှူရှိုက်မိသူများသည်ကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်နေသည့် beta-agonists နှင့်အတူ steroid ရှူရှိုက်မိသူများနှင့် steroids များပါဝင်သည်။ steroid ရှူရှိုက်မိ၏ဥပမာများပါဝင်သည် Flovent HFA , QVAR Redihaler နှင့် Pulmicort Flexhaler ။ ရံဖန်ရံခါကော့တေးကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် ပို၍ ကောင်းသောသတင်း - ဤပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှူရှိုက်သူများသည်အရက်နှင့်လည်းမဆက်ဆံပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ရှူရှိုက်မိသူများအရက်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ရေပန်းစားသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆေးကိုဖွင့်ကြပါစို့ စင်ကာပူ (montelukast) ။ သတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များအရ Singulair နှင့်အရက်သောက်ခြင်းဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုစာရင်းမရှိပါ။ သို့သော် Singulair သောက်သူများတွင်အသည်းပြproblemsနာများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်အရက်ကိုသုံးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအန္တရာယ်အချက်များရှိသည့်လူများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သင်ယူလျှင် Singulair သို့မဟုတ်၎င်း၏ယေဘုယျ (montelukast) သင်သည်အရက်ကိုသာသောက်သင့်သည် သင့်ဆရာဝန်ကအတည်ပြုလျှင် ။ သင်သည်အရက်မသောက်နိုင်ပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်မေးပါကမည်မျှအန္တရာယ်ကင်းသည်ကိုမေးမြန်းပါ။
သင်ရှိသည်ဆိုပါက ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ သင်မည်သည့်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစေကာမူ၊ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီမှာဒေတာတွေအများကြီးမရှိ။ လေ့လာမှုတစ်ခု ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဤအရာသည်သောက်သုံးသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင်ဖြေဆိုသူ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဝိုင်၊ ဘီယာသို့မဟုတ်အရက်များကိုသောက်သုံးပြီးနောက်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စပျစ်ဝိုင်၏အစိတ်အပိုင်းများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည် histamine နှင့် sulfites , တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအရာ။ ဒါ့အပြင်အရက်ကိုတုံ့ပြန်မှုပိုမိုဖြစ်ပေါ် AERD ရှိသူများ (Aspirin ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ) Aspirin ကိုသည်းခံနိုင်သောလူများထက်။
TO သို့ လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ် ရောထွေးသောရလဒ်များဖြစ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည် - အချို့သူတို့သည်အရက်သည်ပန်းနာရင်ကြပ်ခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားလာကြောင်း၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, လေ့လာမှုစာရေးဆရာများပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများနေဆဲသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်သူတို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သောကြောင့်အရက်ယမကာများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
လူတိုင်းမတူကြတာကြောင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပမာဏနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင်၏ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားပါကအရက်နှင့်အရက်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုသင့်တင့်မျှတစွာခံစားနိုင်သည်။ ကျန်းမာအားလပ်ရက်ရာသီမှဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်း!
cetirizine hydrochloride နဲ့ fexofenadine hydrochloride ကိုငါတွဲရမလား